Ajax, nyocha nke sistemụ ikuku na-eme ngwa iji mejuputa | Gam akporosis
Miguel Gaton | | Ngwaọrụ ndị ọzọ, Nche
Chịkọta usoro nchekwa gị maka ụlọ gị ma ọ bụ azụmaahịa gị bụ ezigbo ego ịchekwa yana ịnwe uru nwee ike imeghari ya maka mkpa na mmasị gị. Ajax na-enye anyị usoro nke ya nke na-ezute njirimara ndị a.
1 Expandable na customizable
2 Ngwa Ajax
3 Ntinye na nhazi
4 Otu ugwo, enweghị ugwo
Expandable na customizable
Oge adịghị mma maka enweghị usoro nchekwa n'ụlọ, ma obu ebe obibi ma obu (nke ka njo) ulo nke abuo. Nhọrọ ngwa ngwa bụ ịkpọ ụlọ ọrụ nchebe ọ bụla wee kpọkọta ya n'ụlọ, mana nke ahụ pụtara ịnwe njedebe anyị na Kits ha na-enye anyị ma ọ bụ na-akwụ ụgwọ mgbakwunye na ụgwọ ọnwa maka mgbanwe ọ bụla anyị gbakwunye. Ọzọ ọzọ fọrọ nke nta ka ngwa ngwa bụ usoro nchekwa nke Ajax na-enye anyị.
Nhọrọ a bụ n'ụzọ zuru ezu customizableNwere ike ịhọrọ nke ngwaọrụ ịchọrọ ịwụnye mbụ n'ụlọ gị, ka emesịa nwụnye ma si otú ahụ bulie usoro ịchọrọ n'echeghị n'akpa gị. Na ihe a niile site na ahụmịhe nke akara a raara nye sistemụ nchekwa, nke na-enye anyị ọrụ na ngwaọrụ nke usoro akụrụngwa ndị ọzọ enweghị ike ịrọ nrọ. Na mgbakwunye, ịnwere ike ijikwa ya site na ama gị, nwee nkasi obi.
Usoro nchekwa Ajax ọ na-eme ka ị kwenye? Ọfọn ị nwere ike ịzụta ya na ọnụahịa kacha mma site na njikọ a.
N'etiti ngwa dị iche iche anyị nwere ike ịbanye na weebụsaịtị Ajax anyị na-aga inyocha otu n'ime ihe ndị kasị zuru ezu, nke mejupụtara ngwa ndị a:
Hub 2 etiti ọdụ: ọ bụ etiti nke usoro ihe niile, nke ejikọtara ngwaọrụ ndị ọzọ. Ọ na-ejikọ na isi ụlọ rawụta site na eriri Ethernet, ma nwee ohere nke ịrụ ọrụ n'ụzọ zuru oke site na batrị nwere awa 16 nke nnwere onwe na oghere microSIM abụọ, nke mere na ọ bụrụ na ike apụ, usoro ahụ ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ n'enweghị nsogbu. .
Ikuku kiiboodu Ikuku: nọmba ọnụọgụ iji nwee ike iji aka rụọ ọrụ na deactivate system.
N'akpa uwe ime Ogwe njikwa ijikwa sistemụ mkpu na ikuku mkpu bọtịnụ / bọtịnụ bọtịnụ Ọ nwere ọnọdụ ụjọ na ọnọdụ iji chịkwaa ndapụta akpaaka ụlọ.
HomeSiren siren, ikuku ikuku na-arụ ọrụ mgbe mkpu dara.
DoorProtect Window na Door mmetụta iji chọpụta mmeghe na mmechi nke windo na ọnụ ụzọ.
MotionCam ngagharị ihe mmetụta, nke ọ bụghị naanị na-achọpụta mmegharị kamakwa ọ na-ese foto nke ndị omempụ na mkpebi 640 × 480.
FireProtect anwụrụ ọkụ na okpomọkụ detector nke ahụ ga-eme ka mkpu ahụ rụọ ọrụ ma ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ ma ọ bụ anwụrụ ọkụ na-arịwanye elu na mberede. O nwere mkpu ya nke mere na ọ nwere ike ịrụ ọrụ n'adabereghị na usoro Ajax.
Leaks - Chebe nchọpụta mmiri mmiri idowe ya n’ebe ahu enwere ike ihie mmiri (n’okpuru igwe eji asa ihe, ngwa ndakwa nri, ebe a na-asa mmiri, dgz.)
Smart nkwụnye Socket, na arụ ọrụ ụlọ dị ka akpaaka na mmemme, nke ahụ nwere ike nyochaa ike oriri nke ngwaọrụ anyị jikọtara ya.
Ngwa ndị a niile, belụsọ Hub 2 base, Ha nwere njirimara di nkpa: ikuku ikuku 100%. Not gaghị achọ nkwụnye ọ bụla dabara na ha, n'ihi na ha niile nwere batrị nwere ogologo oge (ọtụtụ afọ ọbụlagodi) nke onye ọrụ ahụ n'onwe ya ga-anọchi ya. Ma ị gaghị echegbu onwe gị banyere njikọ ahụ na etiti ahụ, ebe ọ bụ na njikọ "Jeweler" na-enweta mkpuchi nke ruru mita 2000, nke karịrị ezuru ụlọ ma ọ bụ azụmahịa ọ bụla.
Ntinye na nhazi
Ajax na-atụ aro ka ndị ọrụ họrọ maka nrụnye ọkachamara dịka ọ na-egbochi mkpu ụgha, na-eme ka o doo anya na ụzọ niile ịbanye na-ekpuchi ga-ekpuchi, ma hụ na usoro ọrụ zuru oke. N'ọnọdụ anyị ọ dịghị mkpa ebe ọ bụ na anyị nwere ahụmịhe sistemụ mkpu ndị ọzọ ma anyị nwere ike ịchịkọta ya n'onwe anyị n'enweghị nsogbu.
Ihe mbụ ị ga - eme bụ ịwụnye ngwa gam akporo (njikọ). Mgbe imeghe ngwa ị nwere ike hazie Hub2 isi na mgbe ahụ tinye otu ngwa niile ịchọrọ ịwụnye site na ịgụ QR koodu nke gunyere nke obula. Naanị minit ole na ole ị ga - eme ka usoro ahụ niile kwadebe ma dịrị njikere ịga.
Ọ bụ ngwa dị mfe iji jikwaa, yana menu kensinammuo na nke ị nwere ike ịhụ ozi niile dị mkpa na-enweghị ịnyagharịa site na ọtụtụ menu. Ọ na-ejikọkwa na usoro njirimara nke ekwentị gị iji gbochie onye ọ bụla ịnweta ya. Will ga-ahụ ọnọdụ batrị nke ngwa niile, ogo njikọ na ọkwa nke ihe niile na usoro achọpụtala. N'ime ntọala ahụ, nhọrọ nhazi enweghị njedebe, na-enwe ike ịtọ ọkwa nke ngwaọrụ, setịpụ mmemme arụmọrụ, wdg.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ itinye ụfọdụ ndị ọrụ na ngwa ahụ ọ ga-ekwe omume, inye ya. Enweghi njedebe ma ọ bụ nwa oge ịnweta mkpu anyị, dị mma maka mgbe ndị ezinụlọ ma ọ bụ ndị ọbịa bịara n'ụlọ. Ajax nwekwara ihe ncheta iji rụọ ọrụ ma ọ bụ kwụsị ọrụ mkpu mgbe anyị hapụrụ ụlọ ma ọ bụ rute ya, nke a dị mma ka ọ ghara ịwụli mgbe chi bọrọ mgbe gị na ndị enyi richara nri abalị.
Otu ugwo, enweghị ugwo
Nke a bụ akụkụ kachasị mma nke usoro ihe a: ọ dịghị ego zoro ezo kwa ọnwa. Buy na-azụta usoro gị, ịzụrụ ngwa ịchọrọ, ọ bụkwa ebe ahụ ka ịkwụ ụgwọ ahụ kwụsịrị. Enweghị ụgwọ dị iche iche dabere na ọnụọgụ nke ngwaọrụ ejikọrọ, ma ọ bụ ọrụ ịchọrọ itinye.
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnye ụgwọ maka usoro nche ọzọ, Ajax na-enye anyị ndepụta dị ogologo nke ụlọ ọrụ kwekọrọ na sistemụ ya, gụnyere ndị a kacha mara amara na obodo gị.
Ajax nche usoro
Enweghị ụgwọ ọnwa
Modular na customizable
Enweghị mkpa ịwụnye eriri
O nweghi ese foto nke aka ya
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwaọrụ ndị ọzọ » Ajax, nyocha nke sistemụ nchekwa ikuku kachasị ngwa iji mejuputa
Wiko Y81: Ntinye ọhụụ ọhụụ na ụbọchị abụọ nke nnwere onwe